महिलाको होस्टे, पुरुषको हैंसे- विचार - कान्तिपुर समाचार
महिलाको होस्टे, पुरुषको हैंसे
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
महिलाका सवाल महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै भत्किँदैछ । यो क्रम बढोस् । अग्रजहरू पथप्रदर्शक बनुन् ।
फाल्गुन २४, २०७४ दुर्गा कार्की
काठमाडौँ — भारतीय महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनले बारम्बार भन्ने गर्छिन्– ‘पितृसत्ताले जति महिलालाई हिंसा गरिरहेको छ, त्योभन्दा बढी पीडित पुरुषलाई बनाएको छ ।’
पितृसत्ता वा पितृसत्तात्मक सोचजस्ता शब्द सुन्ने बित्तिकै धेरैले निधार खुम्च्याउँछन् र झिञ्जो मान्छन् । तर यो शब्दले खालि पुरुषलाई मात्र जनाउँदैन, महिलामा पनि यस्तो सोच हुन्छ । पितृसत्ता वा पितृसत्तात्मक सोच भनेको शक्ति सम्बन्ध हो । यसको अर्थ जो शक्तिमा हुन्छ, ऊसँग स्रोतको पहँुच हुन्छ र उसले आफूभन्दा कमजोरलाई विभेद र हिंसा गर्छ । यसर्थ महिला पनि शक्तिमा छन् भने आफूभन्दा कमजोरलाई विभेद गर्छन् । यही हो, पितृसत्तात्मक सोच ।
महिलामाथिको हिंसाका कुरा गर्ने बित्तिकै हामीमध्ये धेरैले सामना गर्ने प्रश्न हो, महिलाले महिलालाई धेरै हिंसा गरिरहेछन् । जस्तै– सासुले बुहारीलाई, नन्दले भाउजुलाई, जेठानीले देवरानीलाई यस्तै–यस्तै । यो मात्रै होइन, घरमा काम गर्न राखेको मानिस पुरुष छ भने पनि ऊमाथि महिलाबाटै उत्तिकै हिंसा र विभेद हुन्छ, भइराखेको छ । त्यसैले यस्तो सोच वा व्यवहार शक्ति सम्बन्ध र स्रोतमाथिको नियन्त्रण वा पहुँचको उपज हो र यो पितृसत्तात्मक सोचले ल्याएको परिणाम हो । किनभने त्यहाँ सबैभन्दा निरीह, स्रोत र शक्तिविहीन जो छ, उसैमाथि हिंसा भइरहेछ । त्यसैले यो सोच पुरुषमा मात्रै निहित हुँदैन, महिलामा पनि हुन्छ ।
सामान्यतया धेरैजसो घर र सम्पत्तिका मालिक, कार्यालयका हाकिम लगायत देशको नेतृत्व तहमा पुरुष छन् । सम्पत्ति वा स्रोतसाधन पुरुषको नियन्त्रणमा छ, कानुन पुरुषले बनाउँछन्, घरदेखि सबै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुष छन्, त्यसैले यस्तो शक्तिको अभ्यास पुरुषबाट धेरै भैरहेको छ, त्यसैले विभेद र हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न पनि पुरुष नै धेरै देखिन्छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ हजार ४ सय ७२ जना महिलामाथि हिंसा भयो । तीमध्ये ९ हजार २ सय ९८ महिला घरेलु हिंसाका सिकार भए । यो तथ्याङ्कले महिला आफ्नै र आफन्तबाटै सबैभन्दा धेरै असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ । घरेलु हिंसामा सबैभन्दा धेरै श्रीमान र त्यसपछि परिवारको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । यस्तै इन्सेकले निकालेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का अनुसार गतवर्ष मानवअधिकार उल्लंघनका ६ हजार ५९ वटा घटना भए । यी मध्ये ५ हजार २ सय ८२ वटा महिलासँग सम्बन्धित थिए ।
यहाँ सबै पुरुषलाई आरोप लगाउन खोजिएको पटक्कै होइन र सबै पुरुष पीडकमात्रै हुन् भन्न खोजिएको पनि होइन । तर दाइजो कम ल्याएको नाममा श्रीमती जलाउनेदेखि आफ्नै छोरी–बुहारी, नातिनी, भतिजी, भान्जी बलात्कार गर्ने पुरुषहरूका कारण विश्वास गर्ने वातावरण नभएको र सबै पुरुष परपीडक हुन् भन्ने नराम्रो खालको सन्देश गएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नराम्रो सन्देशलाई चिर्न अब महिला आन्दोलन वा महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा पुरुषको सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ, ताकि हिंसामा संलग्नहरूमा पनि केही चेतना आओस्, हिंसा गर्न निरुत्साहित बनुन् । किनकि अझै पनि यो मुद्दा महिलाको मात्रै छ र उनीहरूको कुरा कमैमात्र सुनिन्छ । त्यसैले पुरुषले महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदा यो बलियो हुन्छ र सुनिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
अहिले महिला अधिकार र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने पुरुषहरूको जमात उल्लेख्य बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार विरुद्ध आत्मग्लानि सहितका सन्देश बेला–बेला देखिन्छ । ‘आफूलाई पुरुष हुँ भन्न लाज लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि निकै देखिन थालेका छन् । लैंगिक हिंसा विरुद्ध युवा पुरुषको अभिव्यक्ति सुन्दा र अभियानमा उनीहरूलाई पाउँदा लाग्छ, अब आउँदो पुस्ताका महिलाले यस्ता निकृष्ट खालका हिंसाबाट गुज्रनु पर्दैन कि !
‘जसको सवाल उसकै अगुवाइ’ भन्दै महिला तथा दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको लामै समय भयो । अधिकार पाउँदै नपाएको होइन, कानुनी रूपमा पनि निकै उपलब्धि हासिल भएको छ, जुन यस्तै आन्दोलनका कारणले पाएकोमा दुईमत छैन । तर अब यी सिमान्तकृत र विभेदमा परेकोहरूको अधिकारको आवाजमा अरुको पनि आवाज मिसिनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । जसले हरेक मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकोस् । अहिले यस्ता अभियान एक्लिँदै गएर यो सामाजिक समस्या वा सवालभन्दा पनि सम्बन्धितहरूको मात्र सवाल भएजस्तै भएको छ । यी सवाल राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालसमेत बन्नसकेको छैन ।
पछिल्लो समय नेताहरूले भाषण गर्दा माथि उल्लेखित कुनै पनि समुदायलाई सम्बोधन गर्न छुटाउँदैनन्, तर जब उनीहरूलाई अवसर दिने पालो आउँछ, ती सबै बिर्सिन्छन् । त्यस्तै महिलाका विषयमा कार्यक्रम भए वा समाचार लेख्ने काममा महिलालाई नै खटाइन्छ, यो चलन अब तोड्नुपर्ने बेला भएको छ । महिलाका विषय अब महिलाले मात्र बुझेर नहुने भएको छ । कार्यक्रममा आउने धेरै महिलाको कुरा हुन्छ, ‘हामीले त बुझ्यौं, परिवारलाई पनि बुझाइदिनुपर्‍यो ।’
महिला अधिकार र महिला हिंसाका कुरा महिलाले मात्र बुझ्दा कतिपय अवस्थामा घरपरिवारमा द्वन्द्व निम्तिएको छ । महिलाहरू अहिले घर बाहिरका काममा पनि उत्तिकै संलग्न हुनथालेका छन् । आफूले गर्दै आएका घरभित्रका काम अनि कार्यालयको कामका कारण दोहोरो जिम्मेवारीले महिला निकै मारमा परेका छन् । तर घरपरिवार र श्रीमानले यी कुरा नबुझिदिँदा द्वन्द्व हुने सम्भावना बढेको छ । सहयोग माग्दा वा कामको भारबारे कुरा उठाउँदा घरपरिवारमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । परिवारका सदस्य र खासगरी श्रीमान यस्ता कुरामा संवेदनशील भइदिँदा परिवार सञ्चालन सहज हुन्छ । परिवारमा द्वन्द्व हुँदा महिला पीडित त हुन्छन् नै, पुरुषलाई झन् धेरै पीडा दिन्छ, किनकि उसमाथि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको जिम्मेवारी छ । कमाएर ल्याउनुपर्छ । यसका लागि मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु जरुरी छ ।
त्यसैले अब महिला अधिकारका पक्षमा, महिला हिंसा विरुद्ध बोल्ने र बुझ्ने पुरुषहरूको संख्या बढाउनुछ । उनीहरूलाई महिलाप्रति संवेदनशील हुन र सम्मान गर्न सिकाउनुछ । उनीहरूको कामलाई सम्मान गर्न सिकाउनुछ । घरभित्रको काम गरे पनि पुरुषहरूको सम्मान घट्दैन भन्ने सन्देश दिनुछ । श्रीमतीलाई माया वा सम्मान गर्नु र काममा सघाउनु भनेको जोइटिङ्ग्रे हुनु होइन भन्ने बुझाउनुछ । त्यसैले महिला आन्दोलनमा पुरुषको सहभागिता जरुरी छ ।
हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चमा थुप्रै महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाले कार्यक्रम गर्छन्, सरकारी आयोजनामा भब्य जुलुस निस्किन्छ । मन्त्रालयले त्यस दिन निकाल्ने जुलुसमा सरकारी कर्मचारीलाई उपस्थितिका लागि उर्दी जारी हुन्छ र बाध्य भएर ती कर्मचारी जुलुसमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैले यस्ता औपचारिकताका लागि आयोजना गरिने जुलुस कर्मकाण्डी बाहेक केही होइनन् । बाध्यतावश कार्यक्रममा हुने सहभागिताले सहभागीमा कुनै परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास लाग्दैन ।
तर यहाँ छोरा पुस्ताका यस्ता युवा पुरुष अभियन्ता छन्, जसले कुनै दाताको सहयोगविना प्रत्येक वर्ष आफ्नै पहलमा महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम गर्छन्, जुलुस निकाल्छन्, कविता र गीतमार्फत महिलामाथि हुँदै आएको हिंसा विरुद्ध खबरदारी गर्छन् । महिला अधिकार र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसा विरुद्ध खुलेर बोल्छन् र अरुलाई पनि बोल्न आह्वान गर्छन् । यस्ता कार्यक्रमले अब महिलाका सवाल महिलाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै भत्किँदैछ । यो क्रम बढोस् । अग्रजहरू पथप्रदर्शक बनुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा मात्रै हैन, प्रत्येक दिन हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन र यस्तो काम घरैबाट सुरु गर्न प्रेरणा मिलोस् । शुभकामना !
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:२०
महिला नेतृत्व विरूद्ध जालझेल
महिलाको नेतृत्व नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पितृसत्तात्मक संरचनालाई अस्वीकार्य छ र अनेक जालझेलमा पारेर अयोग्य प्रमाणित गर्न कम्मर कसेको छ ।
फाल्गुन १४, २०७४ दुर्गा कार्की
काठमाडौँ — महिलाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर विश्वमै सबैभन्दा पहिला दक्षिण एसियाले पाए पनि राजनीति लगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज ल्याटिन अमेरिकाबाट सुरु भएको हो ।
राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विश्वमै पहिलो महिला (तत्कालीन सिलोन) अहिलेको श्रीलंकाकी श्रीमाभो आर डी बन्दरानायके हुन् । उनी सन् १९६० मा श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री भइन् । २००० सम्म गरी उनले श्रीलंकामा ३ कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरिन् । १९५९ मा उनका पति प्रधानमन्त्री सोलोमन बन्दरानायकेको हत्या भएपछि उनी अकस्मात् राजनीतिमा आइन् र प्रधानमन्त्री भइन् । श्रीलंकामा १९९४ देखि २००५ सम्म उनकै छोरी चन्द्रिका कुमारातुङ्गा राष्ट्रपति रहिन् ।
एसियाली देशहरू भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा धेरै अघिदेखि महिलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेका हुन् । ६० को दशकको अन्त्यमा भारतमा इन्दिरा गान्धी उदाइन् । उनी १९६६ मा पहिलो प्रधानमन्त्री भइन् भने २००७ मा प्रतिभा पाटिल पहिलो महिला राष्ट्रपति भइन् । १९८८ मा पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो मुस्लिम देशहरूमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएकी थिइन् । उनी पाकिस्तानमा २ कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिन् । बंगलादेशले पनि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा शेख हसिनाले नेतृत्व गरिरहेकी छन् । खालिदा जिया २ पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् ।
यहाँ यो किन उल्लेख गरियो भने महिला नेतृत्वमा पुग्दैमा आम महिलाले अधिकार पाउँछन् वा उनीहरूको सहभागिताका लागि कानुन बनाउँछन् भन्नु गलत हो । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँको लोकसभामा जम्मा ११ र राज्यसभामा १०.६ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता छ । दक्षिण एसियामा नेतृत्वमा पुगे पनि महिला सहभागिता निम्ति उनीहरूले न कानुन बनाए, नत अधिकारका पक्षमा कुनै आवाज उठाए । उनीहरू त आफूमात्रै नेतृत्वमा गए बाँकीका निम्ति सिन्को पनि भाँचेनन्, भाँचेका छैनन् । नेपालमा भने अन्य दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा महिलाका लागि कानुन बन्ने र सहभागिताको आवाज उठाउने क्रम अत्यन्तै सकारात्मक छ ।
सन् १९९१ मा ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनामा विश्वमै सबैभन्दा पहिला राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन ‘सकारात्मक विभेद’ सम्बन्धी कानुन बनेको हो । यो संँगै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा महिला नेतृत्वको लहर चल्यो । चिलीमा माइकल वाचालेट, अर्जेन्टिनामा क्रिष्टिना फर्नान्डेज, कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला, ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफ राष्ट्र प्रमुख भए । त्यहाँ दक्षिण एसियामा जस्तो पदमा मात्रै बसेनन् कि राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्वका लागि कानुन बनाए । महिला अधिकार र समानताका लागि आवाज उठाए । त्यही अनुरुप महिला नेतृत्व विकासका लागि बजेट आयो र ती देशमा राजनीति लगायत सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो । अहिले ल्याटिन अमेरिकी ती देशमा ३५ प्रतिशत महिला संसदमा छन् । बोलिभियामा त संसदमा महिलाको बहुमत छ । अमेरिकामैहेर्ने हो भने १९ प्रतिशतमात्रै महिला प्रतिनिधिसभामा छन्भने २२ प्रतिशत सिनेटमा ।
नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणा अंगिकार गरेको हो । पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा २०६३ जेठ १६ मा तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता लगायतका विषयमा संसदमा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्ताव महिलाका लागि कानुनी रूपमा आरक्षणको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यही जगमा पहिलो संविधानसभाबाटै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुरुवात भयो । यतिखेर स्थानीय तहमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत पुगेको छ ।
आरक्षण नीति लागू भएको २६ वर्षको अवधिमा ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिलामा विकास भएको नेतृत्वदायी क्षमताले आफ्ना देशमा मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वका लागिसमेत दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने बनायो । तर शासन सञ्चालन गर्न पुरुषलाई जस्तो सजिलो थिएन । आरक्षणले महिला सहभागिता बढायो, सशक्तीकरण भयो, आवाजहरू बुलन्द भए, तर महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन भने आएन । अर्थात् महिलालाई हेर्ने दोहोरो चरित्रमा सुधार भएन । उनीहरूको शासनकाल अत्यन्त कष्टपूर्ण बनाइयो र भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न अभियोग लगाएर उनीहरूलाई नेतृत्व विमुख पारियो ।
जतिसुकै योग्य र सफल भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन राजनीतिक जालझेल र तिकडम कति गरिन्छ भन्ने सबैभन्दा ताजा उदाहरण त नेपालमै छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको पृष्ठभूमि काफी छ । चिलीकी राष्ट्रपति बाचालेटलाई घरजग्गा कारोबारमा कर छल्न छोरा–बुहारीलाई सघाएको आरोप लाग्यो । कोस्टारिकामा लाउरा चिन्चिला शासनलाई असफल बनाइयो ताकि उनको शासनकालमा कोस्टारिकाको आर्थिक वृद्धिदर ४ बाट ५ प्रतिशत भएको थियो । सन् २०१६ मा ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफलाई उनको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी कानुनहरू पालना नगरेका आरोपमा महाअभियोग लगाएर हटाइयो ।
गतवर्ष दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क गुन हाईलाईआफ्नी एक विश्वास पात्रलाई गैरकानुनी कामका लागि छुट दिएको आरोपमा महाअभियोग लगाइयो । ह्विप नमानेर आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत उनीविरुद्ध मत दिए र सत्ताच्युत गरियो । गतसाल अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाउँदा–पाउँदै पनि इलेक्टोरल कलेजमा हिलारी क्लिन्टनले मत पाउन सकिनन् ।
नेपालमा पनि प्रधानन्यायाधीश छँदा सुशीला कार्कीमाथि यस्तो प्रयास गरिएको थियो, तर यो प्रयास असफल भयो । यी सबैका पछाडी कहीं न कहीं महिलाको नेतृत्व देख्न नसक्ने पुरुषवादी सोच हावी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । महिला नेतृत्वमा भए पनि कुरा आफ्नो सुनेर निर्णय लिउन् वा आफूले भनेको मानुन् भन्ने सोच पुरुषहरूमा देखिन्छ । जब महिलाले आफ्नो बुद्धिमत्ता र क्षमताले काम गर्न थाल्छन्, तब अनेक षड्यन्त्र गरी असफल पार्ने कोसिस गरिन्छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली एकपछि अर्काे विवादमा पर्दा कसरी टिकिरहेका छन् ? किनकि उनलाई यो सम्पूर्ण संरचनाले सहयोग गरिरहेको छ ।
हामीकहाँ स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व आएको छ । गत हप्ता एउटा कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल भन्दै थिए, ‘महिलालाई यस्तो खालको पुरुषवादी सोचले घेरिसकेको छ, उनीहरूलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्र सुरु भइसकेको छ, चनाखो हुनुहोला ।’ प्राय:जसो ‘उप’ पदमा आएका महिलाको गुनासो आउन थालिसकेको छ कि पुरुष नेतृत्वले सकेसम्म महिलालाई जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाएको ठाउँमा पनि आफैं जाने र महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने जस्ता खेल स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको छ ।
यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज र स्वयं ती जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी छ । किनकि महिलाको नेतृत्व नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पितृसत्तात्मक संरचनालाई अस्वीकार्य छ र अनेक जालझेलमा पारेर अयोग्य प्रमाणित गर्न कम्मर कसेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१५